KUFUNGA IZVI: German Shona Words (O-Ö)
KUFUNGA IZVI: Mitsara Inoshandiswa muChikoro cheGermany
KUFUNGA IZVI: Mutauro weGerman Turkish (Tsamba D)
14 October 2013, 21: 04
yeGerman nie haina kuoma kudaro kana ini handinzwisisi Chirungu nyore kana ini ndakajaira nekuti ndinochinzwisisa ndinoshuva kuti handigone kutaura 9. Pasina bvunzo dzeGerman mukirasi. Chirungu mutauro wakanaka kwazvo, asi ndinovimba ini ndichajaira kubata mumusoro kweGerman panguva ino, zororo dzvene remunhu wese ratova kufara 🙂
06 November 2014, 19: 58
Ndinofunga zviri nyore kupfuura chiGerman Chirungu.
30 Range 2014, 07: 13
Ivo vasinganzwisise vese 🙂
08 October 2015, 06: 10
Chirungu chiri nyore pane shamwari asi iwe unofanirwa kuedza kudzidza kuti mudzidzi anofanira kushanda. Uye ivo veGerman, vanofa, das artikelleri dzakaoma kwazvo kuita, asi ngatimboedzai zvakati kuti vaTurkey vapedza basa iri ?????????
16 October 2015, 06: 09
Ini ndofunga inyore kupusa pane chiGerman chirungu.cooooooooooooooooook
02 November 2015, 18: 18
Ndinofunga Russian yakanyanya kuoma. Nekuti Chirungu ndeche einfach asi chiGerman chakafanana neTurkey. Semuenzaniso, kana tikapa zB, tinodana ich du er sie es wir ihr sie Sie. Tora chiito cheMachen semuenzaniso;
Pano chinyorwa chaicho che machen chinoshanduka sekuchinja.
Ari kuita ooo
25 November 2015, 19: 59
Ini ndinofunga izvo zvisikwa zvakaomesesa muJapan :)))
15 November 2016, 20: 27
ChiArab chinonyanya kuoma
12 January 2017, 01: 25
Iyo yakapfava yechiJapan
ébène kuti akati:
08 May 2017, 20: 43
une hurukuro yakanaka kwazvo yeGerman.
Mutauro wakaomesesa wepasi rose muchiArabhu
mai vangu ndizvozvo akati:
27 Mart 2017, 20: 09
Ndine chidzidzo chakanaka kwazvo cheGerman pano